धरानमा स्थगित भएको मतगणना सुरु- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
धरानमा स्थगित भएको मतगणना सुरु
सुनसरी — मतपत्रमा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण करिब १५ घण्टा रोकिएको धरानको मतगणना कार्य बिहीबार बिहान साढे नौ बजेदेखि सुरु भएको छ ।
विवाद भएको वडा नं. २० लाई तत्कालका लागि थाति राखेर अन्य वडाको गणना कार्यलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेपछि गणना कार्य सुरु भएको हो ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार अहिले वडा नं. ८, १२ र १९ को मतगणना भइरहेको छ । बुधबार दिउँसो मतगणनाको क्रममा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षरबिना वडा नं. २० को मतपेटिकामा १८ वटा मतपत्र भेटिएपछि विवाद भएको थियो । उक्त मतपत्र बदर भएको छ । माओवादी केन्द्रले पुनः गणना गर्न माग राखेको थियो ।
बुधबार राति मतदान अधिकृतले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिबिना गणना सुरु गर्ने तयारी गरेपछि करिब १० बजेतिर पुनः विवाद भएको थियो । माओवादी र एमालेका कार्यकर्ताबीच मतगणना भइरहेको भवनमै चर्काचर्की भएको थियो । तनावका बीच बसेको बैठकमा वडा २० को मतगणना थाती राखेर बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि अन्य वडाको मतगणना सुरु गर्नेमा दलहरू सहमति भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०९:४७